dingana fifamatorana fampidirana | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Inona no atao hoe fatorana?
Ny fatorana induction dia mampiasa hafanana fampidirana mba hanasitranana ireo miraikitra. Ny induction no fomba lehibe indrindra hanasitranana ny adhesives sy ny sealants ho an'ny singa fiara toy ny varavarana, hood, fenders, fitaratra aoriana ary andriamby. Ny induction koa dia manasitrana ny adhesives amin'ny fitambarana fibre-to-metal sy carbon fiber-to-carbon. Misy karazany roa ny fifamatoran'ny fiara: spotbonding,
izay manafana ampahany kely amin'ny fitaovana ampiarahina; fatorana peratra feno, izay manafana ny tonon-taolana feno.
Ny rafitra fifamatorana toerana DAWEI Induction dia miantoka ny fampidiran-angovo marina ho an'ny tontonana tsirairay. Ny faritra kely misy ny hafanana kely dia mampihena ny elongation tontonana tanteraka. Tsy ilaina ny fametahana rehefa mifamatotra takelaka vy, izay mampihena ny fihenjanana sy ny fanodikodinana. Ny tontonana tsirairay dia arahi-maso amin'ny alàlan'ny elektronika mba hiantohana fa ny fihenan'ny fidirana angovo dia ao anatin'ny fandeferana. Miaraka amin'ny fatorana peratra feno, iray-sizefits-
Ny kodiarana rehetra dia mampihena ny filana ny kodiarana fiarovan-tena.
Ny induction no fomba fampiraisana tianao indrindra amin'ny indostrian'ny fiara. Ampiasaina be amin'ny famatorana vy sy alim-by vita amin'ny metaly, ny induction dia miasa bebe kokoa amin'ny fifamatorana fitaovana maivana sy gazy karbonika vaovao. Ny induction dia ampiasaina hamatorana kofehy miolakolaka, kiraro vita amin'ny frezy ary andriamby amin'ny indostrian'ny teknolojia.
Izy io koa dia ampiasaina ho an'ny mpitari-dalana, lalamby, talantalana ary takelaka amin'ny sehatry ny entana fotsy.
Inona no fitaovana ampiasaina?
DAWEI Induction no manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana induction. Raha ny marina dia nanamboatra fanasitranana toerana fampidirana izahay.
Ny fitaovana atolotray dia miainga amin'ny singa rafitra tsirairay toa ny loharano herinaratra sy coil, mba hamenoana sy hanohanana tanteraka ny vahaolana famerenana.
Sokajy FAQ Tags firaiketam-po, Fanamafisana ny fatorana avo lenta, induction bonding, induction bonding heater, pifidianana, Fikirakira rà RF